Ukuthunyelwa kwe-SVG kusuka ku-Illustrator > UVielhuber David
Ukuthunyelwa kwe-SVG kusuka ku-Illustrator09
Umsebenzi wokuthekelisa jikelele ungatholakala ngaphansi kwe- " File> Export> Export as ... ". Ekugcineni, khetha i- " SVG (* .SVG) " njengohlobo lwefayela. Uma ungafuni ukutshala izindawo ezisobala futhi ucabangele indawo yokudweba, hlola " Sebenzisa izindawo zokudweba ", ngaphandle kwalokho hhayi. Engxoxweni elandelayo ukhetha izinketho ezilandelayo:
Uma unganelisekile ngezinga lemininingwane yezindlela kumphumela, kancane kancane ukhulisa izindawo zamadesimali ziye ku-3 noma ku-4.
Kuyathakazelisa lapho ushumeke imaski yokunquma kufayela le-vector. Lokhu kungasuswa futhi (lokhu futhi kuholela kumasayizi amafayili amancane nokuhambisana okwandisiwe lapho usebenzisa amathuluzi wokuphrinta afana ne- dompdf ).
Kunezindlela ezimbili ezaziwayo ku-Illustrator: Okokuqala, maka zonke izinto nge-CTRL + A bese ukhetha u- " Object> Redual Transparency ... ". Ngemuva kwalokho ususa obuso obukhona bokuqhafaza nge- " Object> Clipping Mask> Guqula ubuye ". Uma lokho kungasebenzi, yenza okulandelayo esikhundleni sezinyathelo ezimbili zokugcina: Okokuqala khetha " Into> Guqula ...> KULUNGILE " bese ukhetha inketho ethi " Susa indawo egqagqene " kungxoxo yePathfinder.:
I-SVG yokugcina ingabuye ithuthukiswe ngamathuluzi afana ne- svgo (kulayini womyalo noma kwi- web GUI ).